Aphid | Tantsaha anaty aterneto | December 2019
Kalanchoe: mitombo sy mikarakara ao an-trano
Ao an-trano, vitsy ihany ny karazan'i Kalanchoe dia efa lehibe: Cirrus, Blosseld, Single Flower ary Daygremont. Fa na iza na iza amin'ireo karazam-bary ireo dia mitombo ao an-tokantranonao, dia ho toy izany koa ny fikarakarana ny zavamaniry. Ny fepetra takian'ny Kalanchoe Ny solontenan'ny Kalanchoe ao an-trano dia an'ny fianakavian'ny Crassulaceae, avy any amin'ny tropika izy rehetra, ary noho izany, tsy dia mendri-piderana, dia afaka manao ela be sady tsy misy ny hatsembohana ary any anaty tontolo mando.
Hetsi-panoherana sy fomba fiasa hiarovana azy ireo
Ny hydrange dia karazam-borona mahafinaritra. Ho an'ny karazam-borona isan-karazany, ny voninkazo be dia be, ny felam-boninkazo be dia be, ny ravina goavam-be, ary ny tsy filamatra ny hydrangeas dia sarobidy amin'ny zaridaina fambolena. Ny Hydrangeas dia tena mahavariana amin'ny fahalavoana, satria tamin'izany fotoana izany dia afaka mahita lohan-doha, voninkazo sy ravin'ny karazana loko isan-karazany amin'ity orinasa mahavariana ity amin'ny fotoana iray ihany.
Rosia natsangana - fikarakarana trano
Hibiscus, na rose rose, no heverina fa malaza indrindra amin'ny fianakaviana Hibiscus Malvaceae. Amin'ny ankapobeny, dia misy karazana hibiscus 200 eo ho eo, saingy ny rose Shinoa dia lasa malaza amin'ny fambolena fambolena. Fantatrao ve? Ao Malezia, ny rose rose (antsoina hoe Maleziana hoe Bungaraya) dia iray amin'ireo sariohatry ny firenena, izay aseho amin'ny vola madinika.
Ahoana no hanafoanana ny endriky ny raozy ao amin'ny zaridaina, famaritana ny fomba tsara indrindra amin'ny ady
Iray amin'ireo zavamaniry mahavariana, mahafinaritra sy mahafinaritra indrindra amin'ny zaridaina - ny raozy, dia mianjera ihany koa ny fanafihan'ny aretina sy ny bibikely. Ity voninkazo mahafinaritra ity dia mety hamoy ny endriny amin'ny faharesen'ny aphids. Ireo bibikely madinika sy malefaka indraindray dia lasa mianiana fahavalo amin'ny mpamboly, ka mila mahafantatra ny fomba handresena ireo bibikely manimba vovobony.
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Aphid